“Waxaan ku guuleysan doonaa Champions League” – Gool FM
(Champ’ League) 14 Feb 2019. Xidiga reer Brazil iyo kooxda Paris Saint – Germain Neymar Jr ayaa u arka in PSG ay heysato koox aan caadi ahayn, isla markaana ay guuleysan karto isaga la’aantiisa.
Paris Saint – Germain ayaa guul muhiim ah kala soo laabatay Old Trafford la’aanta Neymr Jr iyo Edinson Cavani kulankii ay kooxda Manchester United kula soo ciyaartay lugta hore wareega 16-ka tartanka Champions League.
Inkastoo ay maqnaayeen xidigaha muhiimka ka ah kooxda ee kala ah Thomas Meunier, Neymar Jr iyo Edinson Cavani, hadana saaxiibo ay ka mid yihiin Di María iyo Kylian Mbappé ayaa mas’uuliyad weyn iska saaray sida ay kooxdooda guul muhiim ah u gaarsiin lahaayeen.
Hadaba 26 jirka reer Brazil ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay guushii ay kooxdiisa PSG ka gaartay Manchester United wuxuuna yiri:
“Paris Saint-Germain waxay noqon doontaa guuleystayaasha tartanka Champions League, PSG kuma tiirsana aniga oo kaliya”.
“PSG waxay heysataa koox aan caadi ahayn, waxay leedahay ciyaartoy macalin iyo jamaahiir aad u wanaagsan”.
“Waxaan noqon doonaa guuleystayaasha Champions League, waan ciyaari doonaa”.
DAAWO: Neymar oo Hal Lug ku bood-boodaya mar uu u dabaal degayay Guushii ay PSG ka gaartay Man United